I-Snug enenkuni yavutha ibhafu eshushu. 4-5 abantu
Belbroughton, England, United Kingdom
Ibekwe kwiihektare ezingama-20 zomgama wokuhamba weClent Hills eWorcestershire, le snug isanda kulungiswa inebhubhu yayo etshiswe ngamaplanga kunye nendawo yokuhlala yabucala ngaphandle.
ibekwe ngasemva kwiziko eliphambili le ndawo ifihliweyo ifihliweyo yimbono yokubaleka kuyo yonke. Ngekhitshi esebenzayo kunye negumbi lokuphumla elinemisebenzi emininzi likhaya elisuka ekhaya. Intendelezo yabucala kunye nebhafu eshushu ikulungele ukujonga iinkwenkwezi ngeglasi yento ebandayo esandleni kwaye wonwabe nabahlobo kunye nosapho.
Imisebenzi yangaphandle ifikeleleka kuphela phantsi kweliso leqela lethu. Nceda ubuze malunga nale misebenzi ngexesha lokubhukisha. Basenokuba ngamanye amaqela kwisiza ngexesha lotyelelo lwakho ukuze iziko eliphambili liphume kwimida ngexesha lokuhlala kwakho.
Ibekwe ngaphakathi kwiziko lethu lemisebenzi yangaphandle, indlwana ikumgama wokuhamba weClent Hills eWorcestershire-yindawo efanelekileyo yokuhamba endulini, ukukhwela ibhayisekile intaba kunye nokuhlola.
Kufuphi kukho iiWaseley Hills ezimalunga neekhilomitha ezi-2 kude, iLickey Hills Country Park ikumgama oziikhilomitha ezi-4 kwaye malunga neyure ukuya kwiiMalvern Hills.
KwiBromsgrove ekufutshane kukho iTheatre yeArtrix yemiboniso bhanyabhanya, kunye neMyuziyam yaseAvoncroft.
Thatha uhambo ubuye ngexesha kuloliwe umphunga kwi Severn Valley Railway ukusuka Kidderminster (6miles kude) ukuya Bridgnorth.
Ukuhamba nje kwemizuzu engama-20 ukuya kumbindi weBirmingham kwaye malunga nemizuzu engama-20 ukusuka eWorcester, indlwana yethu yeyona ndawo ifanelekileyo yokuchitha impelaveki okanye ikhefu elongeziweyo nosapho kunye nabahlobo.
Kukho iZiko leFalconry eHagley malunga ne-3miles ukusuka kwindlu yethu kwaye kufanelekile ukutyelelwa.
Kukho inani lee-pubs zasekhaya kunye neevenkile kwiilali zaseBelbroughton, eChaddesley Corbett, eClent, eDodford, eHagley naseRomsley.
Njengoko siliziko lemisebenzi yangaphandle, sisebenza unyaka wonke kwaye sixhomekeke kubhukisho. Sinazo ezinye iindwendwe kwisiza kodwa wonke umntu usasazekile.
Sisenokuba sikwisiza xa ufika. Nangona kunjalo, sikwanalo ukhetho lokuzihlola kwaye siya kukubonelela ngenombolo yefowuni ephathwayo ukuze uqhagamshelane nathi kwimeko kaxakeka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Belbroughton